Sakafo ara-pahasalamana avy amin'ny nono
Ny totozy nohanina dia heverina ho toy ny sakafo ara-tsakafo sy ny kalôria. Raha toa ianao ka manadino ny toetra tena ilaina amin'io hena io ary mampifamatotra azy ireo amin'ny fiomanana mety, dia afaka mahomby amin'ny fahaverezan'ny lanja ianao. Ny fitsangatsanganana amin'ny fikarakarana sakafo sakafo avy amin'ny tratra dia mitaky fatrany farafahakeliny sy ny fihenan'ny sakafo.
Sakafo ara-tsakafo ho an'ny nono akoho
Miorina amin'ny totozy akoholahy dia misy karazan-tsakafo maro isan-karazany, hojerentsika ny fomba tsara indrindra hanomanana azy. Ny mofomamy dia matsiro, salama ary kalorim-pitombenana tsara indrindra, tsara indrindra ny handrahoana azy ao anaty lafaoro, alim-bosoka na entona. Ilaina ny misoroka ny menaka amin'ny alika na fatin'olona.
Ny fitsaboana sakafo ara-pananahana avy amin'ny tazom-bozaka ao amin'ny oven dia miova ary ahafahanao mampifangotra filetsana miaraka amin'ny legioma salama. Ankoatr'izany, ny fofona dia mamela anao hamonjy vitaminina sy mineraly farafahakeliny amin'ny sakafo.
Soso-kevitra ho an'ny nono aostomina ao amin'ny oven
voankazo maitso - 400 g;
tsaramaso mofomamy siramamy - 50 g;
menaka oliva - 2 tbsp. lovia kely.
Ny breast dia manapaka amin'ny ampahany lehibe, mofomamy, manapaka ireo pepera ho kobam-bary na tsilo. Sakafo miaraka amin'ny legioma maivamaivana amin'ny menaka oliva mandrapaha-volomparasy volomparasy. Ao anatin'ny minitra farany dia ampianaro ny habetsaky ny voankazo string. Avy eo dia asio lovia vita amin'ny baka. Ambony amin'ny hena sy legioma mena. Mialao ao amin'ny oven mandritra ny 15 minitra amin'ny hafanana 180 degre. Io lovia io dia mifamatotra tanteraka amin'ny vary voaloboka.
Recipe mba hanamboarana tete-trondro sakafo amin'ny siramamy
10-15% mena - 1 glas;
Lemon - 0.5 p.
sira sy dipoavatra mba hanandrana;
Hetezo ny kofehy amin'ny lavaka lavalava, maina miaraka amin'ny lamba. Ampio sira sy dipoavatra avy eo, ary ampidiro ao amin'ny lovia vita amin'ny baka. Mila fofona sy manadio ny saosy ny oven. Mandrotsaka ao amin'ny gazety ny tongolo lay, manambatra azy miaraka amin'ny saosy soja, mofomamy sy sira amin'ny lemonaka, ampio ny menaka ary manaparitaka kely. Ny totozy tandroka dia manondraka ny saosy ary apetrany ao anaty lavaka fantson-kitay mandritra ny 30 minitra.
Recipe Breast Recipe
volo, sira ary fanatanjahantena - manandrana.
Voalohany dia mila manamboatra marinade ianao, satria mila manosika ny sira avy eo amin'ny voankazo ianao ary manolo izany miaraka amin'ny saosy soja sy tongolo gasy, ampiana sira sy zava-manitra. Sasao ny kofehy ary apetraho eny amin'ny marinade mandritra ny 3-4 ora. Avy eo, alao ny kofehy avy amin'ny marinade, tapaho ny ampahany ary apetaho amin'ny dongom-pitaratra. Cook 20 minitra. Mofomamy tsara ny soja soja ary mipetraha amin'ny ahitra.
Inona no azonao ihinanana amin'ny Krismasy Post - ny fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo matavy
Misy sodium glutamate ve sa tsia?
Tsiranoka, tantely, voankazo ho an'ny fatiantoka
Pomegranate - votoatin'ny kaloria
Tombontsoa sy loza amin'ny cashews ho an'ny vehivavy
Zavrafish trondro Aquarium
Ahoana ny fomba famokarana voamaina?
Goulash ao amin'ny oven mikrofo
Ny famolavolana ny zana-trondro amin'ny tavy
Fampandrosoana ny zaza ao anatin'ny 7 volana - inona no tokony ho vitanao?
Ahoana no handany ny faran'ny herinandro?
Wow: olona 13 izay tsara vintana mba ho teraka miaraka amina kopia marina avy amin'ny olo-malaza iray!
Pasta avy amin'ny chickpea "Hummus" - resipe
Ny mpandoka ny tendrontany amin'ny tiroidin'ny tiroida - soritr'aretina sy fitsaboana
Efitrano fonenana any Skandinavie
Mihinam-bolo - ny antony, ny fitsaboana